Author: Faell Taukree
Laakiin sida ugu fiicani waxa weeyaan kolba ninkii iyo haweenaydii hadday yihiin inay isla wada qabeystaan. Xadiiskan naftiisu waa daciif oo siduu kii hore daciif ku ahaa buu kanna daciif ku yahay. This Blog is dedicate the stories of the prophet Muhammad peace be upon him and his Companions, and Stories of all prophets. Xadiiska waxaa ka horreeyey xadiiskii nahyinaayey in nin uu ku qabeysto biyo ay soo hambaysay oo kasoo hadhay haweeney ama haweenay ay ku qabaysato biyo nin kasoo hadhay [Xadiiska 6aad].
Ciidda bedelkeedii shaambo iyo oomo iyo saabuun iyo ma aha; wax kale marka kuma filla waa ciiddaas.
Illeen saxaabada- ridwaanul Laahi calayhim- kulligood waa wada caadiliin weeyaan oo Allaaba taskiyeeyey- ridwaanul Laahu calayhim- laakiin hadduu weriye raawi kale ahaan lahaa oo saxaabi aan ahayn xadiisku sidaas daciif buu ku noqon lahaayoo sida fannu musdalaxil xadiis lagu yaqaano qofka mubhamka ah [aan magaciisa la sheegin] iyo qofka majhuulka [aan la garanayn] ahba riwaayadooda lama qaato.
Mashruuca qoraal-u-rogista casharadii Shaykh Shariif Cabdinuur Website: September 25, Buluuq al-Maraam Previous post Next post. Aashuunka weyn baa qullah la yiraahaa, qullana waxaa loogu magacaabay waa mid la qaadi karoo qof xoog leh uu qaadi karo; dhulka ka hinjin karo.
Sheekhu wuxuu casharada u akhrinayaa arday xer ah oo uu kitaabo kale usoo akhriyey, sida Riyaadus Saalixiinka, goobta uu casharada ka akhrinayaana waa Makkah. Laakiin haddii aan lagu dhex kaajin laguna dhex qabeysanin oo biyihii inta lasoo darsado musqusha lala tago oo sidaa lagu qabeysto taas marka dhib maleh.
Sidaas ayey culumadu sheegeen inay habboon tahay- sallal Laahu calayhi wasallam- taas ayaana sharci ahaan sugan.
Leave a Reply Cancel reply Enter your comment here Qeyrkoodna xadiiska waa weriyeen oo isaguna waa saxiix. Haddaan helno sheekha oo kalmadda meel kale ku Soomaaliyeeyey kaasaan adeegsanaynaa, haddii kale micna la wada yaqaano oo aan rajaynayno haddaan sheekha usoo bandhigi lahayn inuu ogolaan lahaa ayaan adeegsanaynaa meesheedii. Biyo buluuaul oo meesha ka qaalib noqda baa lagu butaacinayaa. Naaskuu deydeyaayoo carrabkuu soo bixbixanayaayoo wax uu jaqaa buu deydeyayaa.
Abii Daawuud isagana waxaa u sugnaaday: Biyahu hadday fara badan yihiinna xadiiskii Ibn Cumar baynu kusoo buluhqul iyada dhib malaha. Qullatayn waa qullah oo laba laga dhigay.
Haddii ay dani kallifto inaan hadalkii sheekha wax ku kordhino si aan arrin u caddayno, waxaan adeegsanaynaa [ ]. Author archive Author website.
Daatadiisu [jirkiisa] inay nijaas tahay yuu keenayaa, maxaa yeelay afkiisi haddii la yiri wixii uu geliyo waa uu nijaaseeyey, macnuhu waxa weeyaan inuu afkiisu nijaas yahay, afkiisa iyo lugtiisa iyo dabadiisana ma kala duwana. Saydul baxri markaa waxaa lagu fasiray waxa badda laga soo qabsado, dacaamkiisana waxaa lagu fasiray waxa isaga oo dhintay oo badda dul sabbaynaya ama xeebteeda yaalla lasoo qabsado.
Abii Qataadah radiyal Laahu canhu waxaa laga bulukqul Markaa biyihii fadhiyey haddii lagu kaajo waa inaan lagu qabeysan.
Sharaabkiina hala daadiyaa la yiri weelkiina hala dhaqaa la bulkuqul. Markaa xadiiskan sida kitaabka dahaarada uu ugu keenay waxaa weeyaan: Markaa laba aashuun bay noqonaysaa iyo laba haamood iyo wax sidaasoo kale ah ama laba kharbad oo waaweyn siduu Imaamu Shaafici- radiyal Laahu tacaalaa canhu- uu ku fasiray isagu.
Abii Hureyrah- radiyal Laahu canhu- waxaa laga weriyey in uu yiri: Abii Daawuudna magiciisa waxaa la yiraahaa Sulaymaan mwraam Ashcas asSijistaanii. Xadiiska nacnihiisu wuxuu noqonayaa, dukhsiga labadiisa baal midna waxaa ku jirta sun midna dawaa ku jirta.
Marsam sidaa macnaheedu waxa weeyaan biyihii haddii lagu kaajo fadhiyey inay saa ku nijaasoobayaan, waa inayse biyahaasu yihiin biyo yar oo qullataynka ka yar. Waxaa kaluu keenayaa biyaha qusaalada la yiraaho ka nijaaso lagu dhaqay weeyaane inaynan najaas ayagu ahayn marka.
Gabadhii oo soo fiirinaysoo la yaabban yuu Abuu Qataadah arkay- radiyal Laahu canhu- markaasuu yiri adeer mraam la yaaban tahay? Haddii ay dani kallifto inaan hadalkii sheekha wax ku kordhino si aan arrin u caddayno, waxaan adeegsanaynaa [ ]. Qof darawal ah buluusul jid ku socda haddii ilmo yar ama qof waayeela ama haweenay ama wax sidaasi ka hor yimaadaan, ardada jaamacaddaan weydiin jirey, dhiniciisana masjid uu yahay oo hadduu ka qabo is yiraaho masjidka uu ku dhacaayo oo masjidka duminaayo, haddii aanu qabaninna uu qofkaa dilaayo, midkoodee buu dooranayaa?